fikambanana mijoro vonona hanelanelana ny sendikaly sy ny fanjakana ary ny mpanohitra. Raha ny fanazavan’ny dokotera Olivier Landry Rabe, izay mpitondra tenin’izy ireo nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly mantsy dia ahiana ny hisian’ny ady an-trano eto amintsika raha mitohy izao tranga misy izao. Potika ny firenena, hoy hatrany izy, mitaky izay maharary azy avy ny vovonana sendikaly…mitarika hetsika isan-karazany ny mpanohitra noho izany tsy tokony hizirizy intsony ny roa tonta. Ny mpitondra tsy tokony hanakatom-baravarana amin’ny mpanohitra ary tokony hahay hihaino fa tsy hanohitra be fahatany ihany koa ny mpanohitra hoy hatrany ity dokotera iray ity. Nomarihiny manokana fa vokatry ny disadisa politika misy eto amintsika avokoa no mampidangana ny vidim-piainana tahaka izao, indrindra fa ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ka tokony hitadiavan’ny fanjakana vahaolana. Tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana asa ny tanora.